Torohevitra ho an'ny fahagagana sy famantarana ary fahagagana amin'ny 2020 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Torohevitra ho an'ny fahagagana sy famantarana ary fahagagana amin'ny 2020 ny vavaka
Torohevitra ho an'ny fahagagana sy famantarana ary fahagagana amin'ny 2020 ny vavaka
Isaia 43:19 Indro, hanao zava-baovao aho; izao dia hitsimoka izy; tsy fantatrareo va? Hanamboatra lalana any an-efitra va aho, ary hisy ony any an-efitra.
Rehefa tonga ny faran'ny taona 2019, ny zava-dehibe dia manomboka manomana ny taona vaovao 2020. Ny fanomanana ihany no fepetra takiana amin'ny hatsarana. Ny zavatra tsy atakalonao azy, dia tsy afaka ny hihoatra noho izany ianao. Raha te ho tsara ho anao ny taona 2020 dia tsy maintsy miangavy ianao hiomana ara-panahy izao. Androany isika dia hijery ireo toerana ho an'ny fahagagana, famantarana sy fahagagana amin'ny 2020. Tsy maninona na ahoana ny fomba nandresahanao tamin'ny taona 2019, ity taona vaovao amin'ny taona 2020 ity dia mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa manakaiky ny faran'ny taona ianao dia tokony ho mora tohina ara-panahy kokoa noho ny taloha. Tsy maintsy manomboka manomboka manambara ireo zavatra tadiavinao ho hitan'ny fiainanao ianao amin'ny 2020. Tokony hanomboka mamantatra ny lalanao mankany amin'ny fiainanao ianao fahombiazana na dia alohan'ny hidiranao ny taom-baovao aza. Ny mpino rehetra dia mieritreritra fa mandra-pahatongan'ny taona vaovao, izany hoe rehefa mivavaka izy ireo dia tsy manam-pahendrena izany, tsy azonao atao ny mandoa vola any amin'ny efitrano fanadinana, fa miomana amin'ny fanadinana ianao alohan'ny hidiranao amin'ny efitrano fanadinana. Mitovy amin'izany ihany, manomboka miomana amin'ny 2020 ianao, alohan'ny hidiranao ity taona ity. manomboka mivavaka momba ny taom-baovao ianao, manolotra an'izay tanan-javatra rehetra momba anao eo an-tanan'Andriamanitra. Mahita ny faran'ity taona ity ho anao tokoa aho amin'ny anaran'i Jesosy, hitako koa ianao amin'ny taona 2020 amin'ny fomba be dia be amin'ny anaran'i Jesosy.
Ity vavaka ity dia manondro fahagagana, famantarana ary fahagagana amin'ny 2020 dia vavaka izay manome hery anao hanambara ireo fitahiana rehetra manodidina ny fiainanao amin'ny taom-baovao. Rehefa ampidirinao io foto-bavaka io dia amelanao fotsiny ireo fitahian'Andriamnitra amin'ny fiainanao, ny orinasanao, ny asanao, ny fianakavianao sns .. Ny fomba tsara indrindra hidiranao taom-baovao dia ny manao izany am-bavaka, rehefa miditra amin'ny taom-baovao amin'ny vavaka am-bavaka ianao dia mahazo antoka ianao ny fitahiana rehetra isan-taona ary miaro tena amin'ny ozona rehetra amin'ny taona ianao. Mivavaka ho anao aho anio, ny taona 2020 no taonan'ny fahatongavanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Hamepetra amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mamporisika anao hivavaka amin'ity vavaka ity am-pinoana aho ary hitohy hatrany ary hahita ny vokatrao, ny famantarana sy ny fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ray ô, misaotra anao noho ny hatsaranao sy ny asanao mahatalanjona tamin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy aho
2. Ray ô, tanteno ny zavatra tsara rehetra momba ahy amin'ity taona vaovao amin'ny anaran'i Jesosy ity
3. Avelao ho Andriamanitra eo amin'ny fiainako aho amin'ity taona ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Avelao Andriamanitra hitsangana ka hanala baraka ny hery rehetra handresy an'Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy
5. Aoka ny fitovian-kevitra rehetra hitodika amin'ny fanendrena an'Andriamanitra sy mahasoa amin'ny fiainako amin'ity taom-baovao amin'ny anaran'i Jesosy ity
6. Aoka ny rivotra sy ny tafio-drivotra rehetra hampanginina amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Andriamanitra ô amin'ny fiandohana vaovao, atombohy fahagagana vaovao amin'ny fiainako amin'ity taona ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Aoka ny zavatra manakana ahy tsy ho ambony amin'ny taon-dasa ho torotoro amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Aoka ny alitara rehetra manohitra ny fanapotehana ahy, ho fongotra amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Aoka ny hosotra ho an'ny fahatapahana ara-panahy ho tonga amiko amin'ity taona vaovao amin'ny anaran'i Jesosy ity
11. Tompo ô, avelao aho ho amin'ny fotoana mahamety azy amin'ny anaran'i Jesosy
12. Andriamanitra ô amin'ny vaovao vaovao, sokafy ny varavarana fahombiazana sy fitahiana ho ahy amin'ity taona vaovao ity amin'ny anaran'i Jesosy
13. Oh Tompo omeo hevitra voahosotra aho izay hitifitra ahy ho any an-tampon'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy
14. Avelao hiova fo amin'ny fitahiana marobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo taona rehetra laniko sy ezaka ataoko
15. Izaho dia mandà ny toe-tsaina rehetra mahamenatra ara-bola, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Tompo ô, manaova lalana ho ahy, tsy misy làlana mihitsy amin'ity taona ity, amin'ny anaran'i Jesosy
17. Izaho dia mamadika ny fanambarana ratsy rehetra nolazaina fa manohitra ny fiainako amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy
18. Miverina any amin'ny mpandefa aho, ny zana-tsipìka ratsy rehetra nokasaina hanohitra ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
19. Amin'ity taona vaovao ity, dia tsy hihemotra amin'ny fahagagana nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy aho
20. Aoka ny mararin'ny fankahalana rehetra, ny fankahalana sy ny fifandirana ao an-tranoko ho mararin'ny anaran'i Jesosy
21. Izay nambolena tato amiko, izay tsy naseho ankehitriny fa mbola hiseho ihany amin'ny ho avy hamily ahy, ho maina, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Ny hery mpamosavy rehetra, misotro ny ran'ny fiainako ara-panahy, dia maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Voninahitr'Andriamanitra, manaloka ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Herin'Andriamanitra, manomeza hery ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny fanandevozana anatiny rehetra, manelingelina ny fanandevozana ivelany, manapaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ry voninahitry ny fiantsoako, mitsangàna ary ampamirapirato, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Amin'ny herin'Andriama- nitra, tsy hampihemotra ny fiantsoana ahy eo an-dohan'i Delila sy Jezebel, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Nanda ny hisotro ronono aho, tsy maintsy handrehitra afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Ny fahavalon'ny fiderana masina nataoko «tsara», amin'ny faran'ny hazakazako dia maty amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Izaho manapa-kevitra ny tsy hamono ny Samsona amin'ny anaran'i Jesosy.
Misaotra anao Dada, noho ny valiny natao tamin'ny vavaka nataon'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka hanoherana ny fahitana sy ny henatra ao anaty nofinofy
Next lahatsoratraVavaka hanoherana ny fanompoana ny hafa amin'ny nofy
Janet 1 Desambra 2019 Amin'ny 1:22 alina
Misaotra anao tamin'ny fandefasana ireo laharam-bavaka ho an'ny taona 2020. Tena nanampy be izany. Asa tsotra fanadiovana efitrano, izay tsy nitadiavako azy; Nanadio ny efitrano tamin'ny volana lasa teo aho. Hanohy milaza sy hanambara aho fa hanana fandresena amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainako. Hotahin'Andriamanitra ianao amin'ny fiarovana ny ondrinao.
Julie Ann Wilson 15 Janoary 2020 Tamin'ny 11:56 maraina
Misaotra anao manambara izany intelo isan'andro…… handefa fanovana
Maame Sarpong 21 Janoary 2020 Amin'ny 10:14 hariva
hotahian'andriamanitra anie ianao
SALAMO 39 Ny dikan'ny hoe Andininy